Amaokwu Bible maka ndị Katọlik na -eto eto | Ndụmọdụ siri ike?
Youngbụ nwata na itinye aka na ọrụ nke Onye-nwe bụ ihe bara ezigbo uru, ọkachasị n’oge ndị a ebe ihe niile siri ike karịa. Oge ntorobịa na-agbanwe agbanwe mgbe niile ma ọ dị mkpa ịmara ndị ahụ Amaokwu Baịbụl maka ndị Katoliki na-eto eto na anyị nwere n’aka anyị mgbe ọ bụla anyị chọrọ ya.
Ederede nke ike, agbamume, ọmụmaatụ na agbamume pụrụ iche maka ndị na-eto eto kpebirila ijere Onyenwe anyị ozi. Akwukwo ederede ndia nile na Akwukwo Nso di nkpa ma anyi gha acho ima ma agu okwu ya, imata ya nke oma.
Taa ka anyi choro ndi ntorobịa ka ha tinye anya ha nye Onyenwe anyi, anyi juputara na otutu mmehie, furu ochicho nke uwa ma ndi pere mpe bu ndi n’enye oge iji biakwute Chineke, nke a kwesiri ibu ihe diri ndi mmadu niile. .
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịbịarukwu Chineke nso, ma ị bụ nwa okorobịa ma ọ bụ ọ bụrụ na i jewooro ya ozi ma ị na-achọ okwu pụrụ iche, n'ezie akụkụ Akwụkwọ Nsọ ndị a ga-enyere gị aka ụbọchị gị kwa ụbọchị.
1 1. Chineke na-akwado ndị ntorobịa
3 3. Tukwasi obi n'ike nke Chineke
4 4. Ndị na-eto eto nwere enyemaka Chineke
5 5. Chineke na-echebe anyị niile
6 6. Chineke dụrụ ọdụ
7 7. Chukwu nọnyeere anyị
8 8. Soro okwukwe na-eje ije oge niile
9 9. Kwere n'ike nke Kraist.
10 10. Nabata okwukwe n’ime obi gị
11 11. Rịọ maka enyemaka Chineke mgbe ọ dị mkpa
12 12. Okwukwe merie ihe mgbochi niile
12.1 13. Chineke bu olile anya
13 14. Aga m eso Onye-nwe mgbe niile
1. Chineke na-akwado ndị ntorobịa
1 Samuel 2: 26 "Ma nwata na-eto Samuel na-etolite, a nabatara ya n’ihu Chineke na n’ihu mmadụ."
N’akụkụ akwụkwọ nsọ a, a kọọrọ anyị banyere nwa okorobịa toro n’ụlọ nsọ n’ihi na nne ya mgbe ọ mụrụ ya nyere ya Onye-nwe na Samuel dịka nwatakịrị matara ihe ọ ga-abụ ohu Chineke. Ihe omuma atu diri umuaka ndi Katoliki nile ndi kpebiri ijere Chineke ozi site na mgbe ha di na nwata.
Matiu 15:4 “N’ihi na Chineke nyere iwu sị: Sọpụrụ nna gị na nne gị; na: Onye obula ruru nna ma obu nne ya, nwua anwuchu ”.
A mara nke a dị ka iwu mbụ nke na-emezu nkwa ma bụrụ ihe na - atọ ụtọ na ọ bụghị naanị ndị na - eto eto ka emere ya kama ọ bụ mmadụ niile. Agbanyeghị, ndị na-eto eto dabara n'okwu a dịka ọtụtụ n'ime ha na-agabiga ihe isi ike, mgbe ahụ Onyenwe anyị hapụrụ ha ndụmọdụ na nkwa nke ndụ ogologo.
3. Tukwasi obi n'ike nke Chineke
Abụ 3kwá 27:XNUMX "Ọ dị mma ka nwoke kee yok site na nwata."
Ntorobịa n’ime Chineke ma-ọbụ ọ nwere ike ibu ibu ma ọ bụ ihe ọ delightụ ijere ya ozi n’oge ụbọchị ebe ike anyị na mmụọ anyị dị otu narị pacenti. Ntorobịa dị nma ma ọ bụrụ na anyị ewere onwe anyị ka anyị bie ya n'okpuru iwu nke Chineke na emume nke okwukwe anyị mgbe ahụ anyị ga-enwe onye ntorobịa agọziri agọzi n'oge niile.
4. Ndị na-eto eto nwere enyemaka Chineke
1 Timoti 4:12 "Ekwela ka onye ọ bụla n’ime gị nwee oge ntorobịa gị, kama bụrụ ihe atụ nke ndị kwere ekwe n’okwu, omume, ịhụnanya, mmụọ, okwukwe na ịdị ọcha."
Ọtụtụ oge ịbụ nwata ma na-ekwu na anyị chọrọ ije ozi n’ime ụka ma ọ bụ nye Onyenwe anyị obi anyị, ejighị anyị kpọrọ ihe ma, n’ụzọ megidere, anyị na-akwa anyị emo, mana lee, Onye-nwe na-enye anyị ndụmọdụ ma gbaa anyị ume ka anyị were nke anyị. Mkpebi iso ya ọbụna mgbe anyị bụ ụmụaka.
5. Chineke na-echebe anyị niile
Abụ Ọma 119: 9 Nwa-nwoke a g willsi a cleana me ka uzọ-ya di ọcha? Site n'idebe okwu gị. ”
Needszọ nke ndị Katọlik na-eto eto na nke onye ọ bụla na-eme okwukwe nke obi, ọ dị mkpa ka a sachapụ ya mgbe niile ebe ọ bụ na ọ na-emebi unyi mgbe ahụ anyị ga-asụ ngọngọ. N’akụkụ a, Chineke na-ajụ anyị ajụjụ ma na-enye anyị azịza ya. Naanị otu anyị ga-esi kpochapụ ụzọ anyị bụ idobe okwu Chineke.
6. Chineke dụrụ ọdụ
Jeremaịa 1: 7-8 “Chineke wee sị m: Asịla: Abụ m nwata; n'ihi na ị ga-aga ihe niile m zigara gị, ị ga-ekwukwa ihe niile m zigara gị. Atụla egwu n’ihu ha, n’ihi na m nọnyeere gị ime ka ịtọhapụ gị, ka Chineke kwuru ”.
Enwere ike igosi anyị nsogbu nke oge niile, n'agbanyeghị afọ ole anyị dị, mana mgbe anyị bụ nwata, o yighị ka nsogbu ndị a ọ̀ ga-eweghara echiche anyị. Anyị ji n’aka na Onyenwe anyị na-aga ebe niile ma na-eduzi anyị ime ihe nke ọma, ọ na-ewusi anyị ike.
7. Chukwu nọnyeere anyị
1 Ndị Kọrịnt 10:23 “Ihe niile bụ ihe iwu kwadoro m, mana ọ bụghị ihe niile dị mma; ihe niile ziri ezi nye m, mana ọbụghị ihe niile na-ewuli elu ”.
Akụkụ Akwụkwọ Nsọ a na-anwa ịgwa anyị na ọ bụ ezie na anyị nwere ike ime ihe niile, ọ bụ ịsị na anyị nwere ọchịchọ na ike ime ihe niile ọbụlagodi ma ọ bụrụ na nke a ma ọ bụ na amaghị m ezigbo ihe ọ bụla, anyị enweghị ike ime ya n'ihi na ọ naghị adabara anyị. Anyị dị iche n’ihi na e doola anyị iche site n’oge anyị bụ ụmụaka iji jeere Chineke ozi.
8. Soro okwukwe na-eje ije oge niile
Taịtọs 2: 6-8 “Ọ na-agba ndị na-eto eto ume ka ha bụrụ akọ; na-egosiputa onwe gị n’ihe niile dịka ọmụmaatụ ezi ọrụ; n'izi ihe igosipụta iguzosi ike n'ihe, ịdị njọ, okwu na-enweghị mgbagha, ka ihere mee onye mmegide ahụ, ma ọ nweghị ihe ọjọọ ọ bụla gbasara gị. ”
Ndụmọdụ anyị chọrọ ọ bụghị naanị maka ntorobịa kamakwa n'oge ọ bụla. Akwụkwọ nsọ ị nwere ike ịrara nye enyi gị ma ọ bụ nye onye ikwu gị. Ọ na-akọwa nke ọma na nkọwapụta etu omume anyị kwesịrị ịdị ọ bụghị naanị na ụka kamakwa na mpụga ya.
9. Kwere n'ike nke Kraist.
Mme N̄ke 20:29 "Ebube ndi umuaka bu ike ha, ma mma ndi okenye bu agadi ha."
Ndị na-eto eto, n'ọtụtụ oge, dị ike, sie ike, na-atụ ụjọ ma na-atụ egwu ihe ọ bụla, mana ndị agadi na ihe ha hapụrụ bụ ịnụ ụtọ ndụ dị mma. Nke a ga - ekwe omume naanị mgbe anyị nyefere afọ anyị kachasị mma maka ijere Onyenwe anyị ọrụ, ma ọ bụrụ na anyị na - eme ihe anụ arụ na-eburu anyị.
10. Nabata okwukwe n’ime obi gị
2 Timoti 2:22 “Gbaakwanụ agụụ mmekọahụ nke oge ntorobịa, wee gaa n'ihu Ikpe Ziri Ezi, okwukwe, ịhụnanya na udo, gị na ndị ji obi dị ọcha na-akpọku Onyenwe anyị ”.
Ọchịchọ ntorobịa bụ onye iro siri ike na ọ bụ ya mere anyị enweghị ike ịnagide ya mana anyị ga-agbanahụ ha oge niile. Eleghi anya inwe omume n’emebighi obi na ndagide a bu ihe na - eme anyi ihe nleda anya ma mara na ugwo a sitere na Chineke obughi n’aka mmadu.
11. Rịọ maka enyemaka Chineke mgbe ọ dị mkpa
Salmo 119: 11 Edebewo m okwu gị n'obi m, ka m ghara imehie gị. "
O nweghi ihe dị mma karịa jupụta n'okwu Onye-nwe anyị. Okwu nile a ka ana achọta n'okwu Chineke, ọ dịkwa mkpa na anyị ga-eburukwa ha n'ime anyị nke mere na mgbe ọ bụla anyị chọrọ amaokwu ma ọ bụ okwu ndị a, ha na-enye anyị ike na udo, na mgbakwunye, ime ka anyị zere mmehie.
12. Okwukwe merie ihe mgbochi niile
Ndị Efesọs 6: 1-2 Mụ, ruberenụ ndị mụrụ unu isi n'ime Onyenwe anyị, n'ihi na nke a bụ eziokwu. Sọpụrụ nna gị na nne gị, nke bụ iwu mbụ e kwere nkwa ya. ”
Ọbụghị naanị irubere nne na nna anyị isi kamakwa irubere Chineke isi, nke a bụ omume na-amalite n’ụlọ anyị, mgbe ị na-erubere nne na nna anyị isi na ị na-emezu okwu Chineke, ọ ga na-ahụ maka imezu nkwa ya. Odi nma na anyi rubere nne na nna na Chineke isi, echefula ihe a.
13. Chineke bu olile anya
Salmo 71: 5 "N'ihi na Gi onwe-gi, Jehova, Chineke, bu olile-anyam na ntukwasi-obim site na nwata. "
Obere ihe anyị raara onwe anyị nye ijere Onyenwe anyị ozi, ọ ka mma. Inwe ndu nye Chineke nke kere anyi, onye nyere anyi ndu, onye n’enye anyi oge nile na onye huru anyi n’anya n’onye n’enweghi nkweghi ego, anyi kari inweta. Ka o buru ike na nchekwube anyi ebe anyi bu nwata.
14. Aga m eso Onye-nwe mgbe niile
Joshua 1: 7-9 "Di ike, nwe kwa ume nke-uku, ilezi anya ime dika iwu nile si di nke orùm, bú Moses, nyere gi n'iwu; ewezugala onwe-ya site n'aka-ya ma-ọbu n'aka-ekpe, ka i we nwe uche n'ihe nile nke aka gi. Akwukwo iwu a agaghi-apu n'ọnu-gi ma-ọli, kama i gātughari uche na ya ehihie na abali, ka i we debe, me dika ihe nile si di nke edeworo; n'ihi na mgbe ahụ ị ga-eme nke ọma n'ụzọ gị, ihe niile ga-agara gị nke ọma. Lee, m na-enye gị iwu ka ị gbaa mbọ ma nwee obi ike; atụla egwu, atụkwala ụjọ, n’ihi na Chineke gị ga-anọnyere gị ebe ọ bụla ị na-aga ”.
Ndụmọdụ doro anya zuru oke ma bụrụkwa nke na-akpọ gị oku iji mejupụta anyị n'ike gị iji merie nsogbu. Anyị kwesịrị ịgbalịsi ike ma nwee obi ike, dịka ndị Katoliki na-eto eto enwere ọtụtụ nsogbu anyị ga-eche ihu ma ọ bụ mgbe ahụ ka kansụl a na-enweta ike. Ka anyị ghara gafere Wayszọ Chineke N'ihi na ọ bụ ụlọ ọrụ anyị.
Nweta ike nke amaokwu Bible ndị a na ndụmọdụ maka ndị Katoliki na-eto eto.
Gụọ kwa akụkọ a Amaokwu 13 nke agbamume y Amaokwu 11 nke ịhụnanya Chineke.
Amaokwu 12 maka olulu di na nwunye
Amaokwu nke 11 banyere ịhụnanya Chineke